Maxaa ka jira in Madaxweyne Xaaf la kulmay Masuuliiin kasoo jeeda dalalka Qadar iyo Imaaraatka ? – Balcad.com Teyteyleey
Maxaa ka jira in Madaxweyne Xaaf la kulmay Masuuliiin kasoo jeeda dalalka Qadar iyo Imaaraatka ?
Madaxweynaha Maamulka Galmudug Axmed Ducaale Geelle (Xaaf) oo maanta kasoo degay garoonka Diyaaradaha Aadan Cadde kadib safar uu ku tagay magaalada Nairobi ayaa ka hadlay warar Warbaahinta qaar baahiyeen oo sheegayay in uu la kulmay Masuuliyiin kasoo jeeda dalalka Qadar iyo Imaaraatka.
Xaaf ayaa Waxbo kama jiraan iyo been abuur ku tilmaamay in magaalada Nairobi intii uu joogay uu la kulmay Masuuliyiin kasocday dalalka Qadar iyo Imaarataka Carabta uuna kala hadlay Khilaafka siyaasadeed ee ka aloosan Wadamada Khaliijka.
Waxa uu sheegay Madaxweynaha in uusan warkaasi jirin uuna kaliya magaalada Nariobi kula kulmay Madaxda Hay’adaha taageera Soomaaliya iyo Jaaliyada kasoo jeeda Deegaanada Galmudug ee ku sugan magaalada Nairobi.
Madaxweynaha Galmudug ayaa sheegay in safarkiisu uu ahaa mid guul kusoo dhamaaday, waxa uuna balan qaaday in uu deg deg ugu laabanayo deegaanada maamulka Galmudug si uu halkaasi uga sii wado dib u heshiisiin iyo howlo kale oo muhiim ah maamulkiisa.
Dowlada Soomaaliya ayaa siyaasad dhax dhaxaad ah ka qaadatay Khilaafka siyaasadeed ee u dhaxeeya Dowlada Qadar iyo xulufada Sacuudiga hor boodayo, mana jiro maamul goboleed wax ka badali kara go’aanka a qaateen Madaxda ugu sareysa dalka.
The post Maxaa ka jira in Madaxweyne Xaaf la kulmay Masuuliiin kasoo jeeda dalalka Qadar iyo Imaaraatka ? appeared first on Ilwareed Online.
DEG DEG: Bambo Gacmeed lagu Weeraray goobaha ganacsiga Suuqa Bakaaraha
Ra’iisal wasaare Kheyre oo Addis Ababa ka degay si uu uga qeyb galo shirka midowga Africa